Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Kugadzirira Kubhabhatidzwa | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malay Maya Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 2: Kugadzirira Kubhabhatidzwa
Kana uri kurarama zvinoenderana nemitemo yeBhaibheri uye uchiita kuti ushamwari hwako naMwari hurambe hwakanaka, zvichida wavakufunga nezvekubhabhatidzwa. Ungaziva sei kana zvava kuita kuti ubhabhatidzwe? *
Ndinofanira kuva neruzivo rwakawanda sei?
Ndinofanira kunge ndichiitei?
Kuti munhu akwanise kuzobhabhatidzwa hazvirevi kuti anofanira kubata nemusoro mavhesi sezvinoita munhu anenge achida kunonyora bvunzo dzekuchikoro. Asi unofanira kushandisa ‘pfungwa dzako’ kuti uve nechokwadi mumwoyo mako kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi. (VaRoma 12:1) Semuenzaniso:
Unonyatsobvuma here kuti Mwari ariko uye kuti akakodzera kunamatwa?
Bhaibheri rinoti: “Munhu wese anosvika kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa mubayiro vaya vanomutsvaga nemwoyo wese.”—VaHebheru 11:6.
Zvibvunze kuti: ‘Nei ndichitenda muna Mwari?’ (VaHebheru 3:4) ‘Nei ndichifanira kumunamata?’—Zvakazarurwa 4:11.
Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Takasikwa naMwari Here Kana Kuti Takabva Kumhuka?—Chikamu 1: Sei Tichiti Mwari Ariko?”
Unonyatsobvuma here kuti Bhaibheri rakanyorwa naMwari?
Bhaibheri rinoti: “Magwaro ese akafemerwa naMwari uye anobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa zvinhu, pakurayira zvakarurama.”—2 Timoti 3:16.
Zvibvunze kuti: ‘Nei ndichiti zvinhu zviri muBhaibheri hadzisi pfungwa dzevanhu?’—Isaya 46:10; 1 VaTesaronika 2:13.
Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Bhaibheri Ringandibatsira Sei?—Chikamu 1: Kudzidza Bhaibheri?”
Unonyatsobvuma here kuti Jehovha ari kushandisa ungano yechiKristu kuti basa rake riitwe?
Bhaibheri rinoti: “Ngaakudzwe [Mwari] pachishandiswa ungano uye pachishandiswa Kristu Jesu kusvikira kuzvizvarwa zvese nariini nariini.”—VaEfeso 3:21.
Zvibvunze kuti: ‘Zvinhu zvandinodzidza muBhaibheri pamisangano yeungano ndinozviona sezvinobva mupfungwa dzevanhu here kana kuti kuna Jehovha?’ (Mateu 24:45) ‘Ndinopinda misangano yeungano here kunyange vabereki vangu vasipo (kana uchibvumirwa)?’—VaHebheru 10:24, 25.
Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Nei Tichipinda Misangano paImba yeUmambo?”
Kuti ubhabhatidzwe hazvirevi kuti hauchafaniri kukanganisa. Asi unofanira kuratidza kuti unonyatsoda ‘kubva pane zvakaipa, woita zvakanaka.’ (Pisarema 34:14) Semuenzaniso:
Uri kurarama zvinoenderana nemitemo yaJehovha here?
Bhaibheri rinoti: “Rambai muine hana yakanaka.”—1 Petro 3:16.
Zvibvunze kuti: ‘Ndiri kuratidza here kuti “simba rangu rekunzwisisa” “rakadzidziswa kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa”?’ (VaHebheru 5:14) ‘Pane pandinoyeuka here pandakakwanisa kuramba kufurirwa nevezera rangu kuita zvakaipa? Ndakasarudza shamwari dzinondikurudzira kuita zvakanaka here?’—Zvirevo 13:20.
Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Ndingadzidzisa Sei Hana Yangu?”
Unoziva here kuti uchazvidavirira kuna Jehovha pamusana pezvaunoita?
Bhaibheri rinoti: “Mumwe nemumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari.”—VaRoma 14:12.
Zvibvunze kuti: ‘Ndiri munhu akatendeseka anotaura chokwadi here?’ (VaHebheru 13:18) ‘Ndinobvuma here zvandinokanganisa kana kuti ndinoedza kuzvivanza kana kuti kupomera vamwe?’—Zvirevo 28:13.
Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Ndingaita Sei Kana Pane Zvandakanganisa?”
Uri kuramba uine ushamwari hwakanaka naJehovha here?
Bhaibheri rinoti: “Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.”—Jakobho 4:8.
Zvibvunze kuti: ‘Ndiri kuitei kuti ndiswedere pedyo naJehovha?’ Semuenzaniso, ‘Ndinoverenga Bhaibheri kakawanda sei?’ (Pisarema 1:1, 2) ‘Ndinogara ndichinyengetera here?’ (1 VaTesaronika 5:17) ‘Ndinotaura zvinhu sezvazviri here pandinonyengetera? Shamwari dzangu ishamwariwo dzaJehovha here?’—Pisarema 15:1, 4.
Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Bhaibheri Ringandibatsira Sei?—Chikamu 2: Nakidzwa Nekuverenga Bhaibheri” uye imwe yakanzi “Nei Ndichifanira Kunyengetera?”
ZANO: Kuti ubatsirwe kugadzirira kubhabhatidzwa, verenga chitsauko 37 chebhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2. Tarisawo mibvunzo iri papeji 308 kusvika 309.
^ ndima 1 Verenga nyaya inoti “Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 1,” iyo inotaura zvinorehwa nekuzvitsaurira kuna Mwari uye kubhabhatidzwa uye kuti zvakakosherei.
“Zvikamu zvine zvekuita zvine chekuita nekubhabhatidzwa zviri mubhuku raVechiduku Vanobvunza Kuti zvakandibabtsira kuona zvandaifanira kugadzirisa ndisati ndabhabhatidzwa. Zvakandibatsirawo kuva nezvinangwa zvandaida kuzozadzisa kana ndabhabhatidzwa. Kuzvitsaurira kuna Jehovha idanho rakakura chaizvo, asiwo iropafadzo yakakura.”—Gabriella.
“MuBhaibheri, Timoti akaudzwa kuti: ‘Ramba uchiita zvinhu zvawakadzidza uye zvawakabatsirwa kuti utende.’” (2 Timoti 3:14) “Wana nguva yekudzidza Shoko raMwari kuti unyatsova nechokwadi mumwoyo mako kuti zvarinodzidzisa ndezvechokwadi. Unozvitsaurira kuna Jehovha kwete kuvanhu, saka uchifunga nezvekubhabhatidzwa funga nezvekuti Mwari anonzwa sei.”—Caleb.
Kudzokorora: Ndingagadzirira sei kuti ndizobhabhatidzwa?
Ongorora zvaunotenda. Unonyatsotenda here kuti Mwari ariko, uye kuti akakodzera kunamatwa? Unonyatsotenda here kuti Bhaibheri iShoko raMwari rakafemerwa? Uye kuti Jehovha ari kushandisa sangano rake kuti basa rake riitwe?
Ongorora mararamiro ako. Uri kurarama zvinoenderana nemitemo yaJehovha here? Unoziva here kuti uchazvidavirira kuna Jehovha pamusana pezvaunoita? Uri kuramba uine ushamwari naJehovha here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 2: Kugadzirira Kubhabhatidzwa
ijwyp nyaya 110